Ukubheja kukaSony kwakhona kwiirekhodi zeVinyl | Iindaba zeGajethi
Ukubheja kukaSony kwakhona kwiirekhodi zevinyl
Okwexeshana ngoku kubonakala ngathi iifashoni ze-retro ziza zihambe. Yonke into endala ipholile. Kwaye kakhulu. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, uninzi lwalungabasebenzisi abaqala ukuphonononga ikhabethe labo kumashumi eminyaka eyadlulayo, kwaye babuyela ekusebenziseni iilokhwe, iibhatyi kunye nesuti ukusuka kwiminyaka yama-70 ukuya kuma-80. nje ngee-retro consoles ezinjengeNintendo Classic Mini. Ngoku lixesha leerekhodi ze-vinyl.
USony ubeyinkampani yokuqala ukubhengeza ngokusesikweni ukuba uza kuwuthengisa umculo ngale fomathi kwakhona ngenxa yempumelelo enkulu yokuthengisa abaye banayo kule minyaka mibini idlulileyo. USony uyekile ukusebenza kule fomathi ngo-1989 xa i-CD yaqala ukuba sisixhobo esithandwa ngabasebenzisi xa bethenga umculo.
Ngokucacileyo uSony ufuna ukuthatha ithuba kuyo yonke inkqubela phambili yetekhnoloji ebisemarikeni ukuzama ukuyithatha kungekuphela nje ekuvelisweni kweevinyl, kodwa ikwafuna ukuphucula umgangatho wento efanayo kangangoko kwaye oku kunyeujonge iinjineli ukulawula lo mbandela. Okwangoku kubonakala ngathi amazwe ngamazwe aya kuqala ukumilisela olu hlobo lwefomathi yomculo eJapan, ngomculo wesintu ovela kweli.
IJapan ibe yenye yeemarike eziphambili zale fomathi, apho i-HMV yasentsomini ineemigangatho emine apho sinokufumana wonke umculo onokuwudinga kunye nakweyiphi na ifomathi. Olu tyekelo alutsali kuphela olona luvo, kodwa ngakumbi nangakumbi abantu abancinci kweli lizwe banomdla kwi-vinyl, into eyathi kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa kwakhutshwa i-CD, kwakunzima ukuyicinga.
Ngaba iya kuba sisinhanha? Ngaba ibhulukhwe ye-corduroy nayo iya kuba nefashini ngaphambili?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Ukubheja kukaSony kwakhona kwiirekhodi zevinyl
Lawula isantya kunye nenani lokujika kwesipina sakho ngale modeli yeBluetooth